Home AFRICAN STARS Nicolas Pepe Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Nwere ike 10, 2019
Nicolas Pepe Child Story Plus Nkọwapụta Eziokwu site na LB
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara amara dị ka "Nico". Ụmụ Nkọwa nke Nicolas Pepe Akụkọ ya na akụkọ na-enweghị isi akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site n'oge ọ bụ nwata ruo n'oge.
Akụkọ Nkuzi nke Nicolas Pepe - Site na nwata ruo oge. Ebe E Si Nweta FutWiz
Nyocha a gụnyere oge ndụ ya, ndabere ezinụlọ, agụmakwụkwọ / ịrụ ọrụ, ọrụ ndụ oge mbụ, ụzọ a na-akwanyere ùgwù, na-ebili na akụkọ a ma ama, ndụ mmekọrịta, ndụ onwe onye, ​​ndụ ezinụlọ, na ụdị ndụ ndị ọzọ.
Ee, onye ọ bụla maara ikike ya nke mere ka ọgbakọ ndị Europe na-adịghị ike ma na-arịọ na Knees. Otú ọ dị, ọ bụ nanị aka ole na ole nke football fans tụlere Nicolas Pepe's Biography nke na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Nicolas Pepe Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
A mụrụ Nicolas Pepe na 29th nke May 1995 na nne ya na nna papa Celestin na Mantes-la-Jolie na-anọ n'ebe ugwu France. N'okpuru ebe a bụ foto ndị mụrụ ya; nna na-arụsi ọrụ ike na ezigbo nne.
Nicolas Pepe Ndị nne na nna. Ebe E Si Nweta MondialSport
Nicolas Pepe sitere na mmalite dị umeala n'obi na ezughị okè ezinụlọ. Ọ bụ ezie na a mụrụ ya na France, ma nne na nna ya bụ ndị Ivorians bụ ndị si na Ivory Coast kwaga France na MidNolxs iji chọọ ndụ ka mma.
N'ịbụ ndị nọ na Paris, nne na nna Nicolas Pepe chọrọ ịchọ ọrụ dịnụ. Nna ya Celestin weere ọrụ nke onye na-elekọta ụlọ mkpọrọ mgbe mama ya nọgidere na-elekọta ụlọ. Ha mụrụ Nico wee zụlite ya na nkwutọ Mantes-la-Jolie. N'ikpeazụ mgbe ọ bụ nwata, nne na nna Nicholas Pepe kpebiri ịkwaga Poitiers dị n'ebe ọdịda anyanwụ France mgbe papa ya rụsịrị ọrụ n'ebe ahụ.
Nicolas Pepe Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Ụlọ Akwụkwọ Ọmụmụ na Ọrụ
Na-etolite na Northeast Paris, e nweghị ihe eji egwuri egwu ma ọ bụ egwuregwu. Niile Nicolas mere bụ ịgba bọl bọl. Ọ na-ahụkarị bọl na ụkwụ ya. Isi ihe omumu nke akwukwo ya biara mgbe o mere agadi 6. Nke a bụ oge ọ zutere onye nkụzi ya na ụlọ akwụkwọ nke jụrụ ya ... "Nicolas, gịnị ka ị chọrọ ime ná ndụ?"
Ụlọ Ọrụ Nkà Mmụta na Ụlọ Ọrụ Nicolas Pepe. Ebe E Si Nweta Theblacklistpub
Nicolas zara ya; "Achọrọ m ịbụ ndị ọkachamara ọkachamara mgbe m tolitere". Mkpebi a juru onye nkuzi ya anya nke na-amaghị na Nico dị ike - kpebisiri ike iru ihe mgbaru ọsọ ya. N'ihi ya, o kpebiri inyere nwatakịrị ahụ aka.
Nleta nke ịga nke ọma na France na 1998 World hụrụ ọtụtụ ndị Africa na-akwaga na football. Nicolas abụghị naanị otu. Ọ bụ ezie na ọ nọgidere na-agụ akwụkwọ ya ma jiri ya na-agba ya ruo mgbe ọ dị afọ iri na ụma. Nico abughi ihe omumu nke ulo akwukwo ndi ozo noo 5-9.
Nicolas Pepe Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Ndụ Ndụ Mmalite
Nicolas nọgidere na-enwe mmasị maka bọl hụrụ ka ọ na-aga ọnwụnwa ma na-edebanye aha na ụlọ ọrụ French, bụ Poitiers FC (nke a maara ugbu a dịka Stade Poitevin). Umu ndi otu ndi isi ulo n'oge ahu na-egwuri egwu na nkeji ise nke French.
Ọ bụ afọ ole na ole ka ọ bụ afọ ole na ole. Ebe e si nweta West-France.
Mgbe ọ na-esonye na klọb ahụ, onye ọ bụla na-agbanye ike ya na bọl ahụ. N'agbanyegh i ihe omuma ya n'adoro ntorobia, ndi na-acho ntuputa nke umuaka si na ulo akwukwo di iche iche malitere ime ka aru ndi Nicolas Pepe kwusi ike na nchegbu gbasara omume ya. E nwere echiche na Nicolas ekweghị na ya bụ onye umengwụ n'ọnọdụ ụfọdụ. N'ihi eziokwu a, ọ dịghị onye bịara ma ọ bụ jiri ya kpọrọ ihe.
N'agbanyegh i nkwenye nke ndi na-acho football na ndi ozo na-acho, Pepe maara ihe o choro. O mesịrị nwetaghachi akwụkwọ ya ka ọ na-abụ mgbe niile na ndị ọrụ Poitiers mbụ.
Nicolas Pepe Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Akpanwu akwukwo akuko
Nrụ ọrụ Nicolas Pepe nọgidere na-aga n'ihu ka ọ na-enyere aka na Poitiers iji nweta mmeri 3-1 bụ nke chebere ha site na nnyefe na oge 2012-2013. Ihe ịga nke ọma dị otú ahụ nyeere ya aka na Angers, ụlọ ọrụ football nke dị na Western France.
Ịhụnanya anya otu nhụ anya:
Nke a bụ ntụgharị oge nye nchịkwa Nicolas Pepe. Ihe niile mere n'ụbọchị mara mma. Dabere na BleacherReports, ọ bụ ụbọchị ọfịs Sporting Director Luis Campos hụrụ Nicolas mgbe ọ na-aga egwuregwu ọ na-egwuri egwu.
Nicolas Pepe Road Fame Story - Ụbọchị ọ hụrụ. Ebe E Si Nweta ubi
Ọ bụ ezie na onye bụbu Real Madrid scout nọ n'ebe ahụ iji lee onye na-egwu egwu egwuregwu. ma site na mgbe ahụ, ọ hụrụ Pepe, o nwere anya maka onye ọ bụla ọzọ n'egwuregwu bọl, ọ bụghị ọbụna onye ọ na-eleta anya ya. Nke a "ịhụnanya anya otu nhụ anya" gbasiri ike mgbe Pepe weputara ihe ntanetịime 82nd nke kachasị mma.
"M ngwa ngwa hụrụ ya n'anya," Campos gwara ụlọ ọrụ France na ajụjụ ọnụ. Mgbe ọ hụrụ Pepe nke ọma, o kpebiri ịgwa onye nwe ụlọ Lille ịzụta French-Ivorian kpakpando.
Nicolas Pepe Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Na-ewu ewu Akụkọ
Nicolas Pepe sonyeere Lille na 21st nke June 2017 mgbe ọ kwusịrị ego na Orléans. Naanị ọnwa ole na ole n'ịbanye na klọb ahụ, ọ ghọrọ akụkụ nke usoro mmeghachi omume siri ike site na njikwa ụlọ ọrụ ahụ. Nnukwu ọgba aghara ya na-eme ka Lille ghọọ otu n'ime ìgwè ndị agha na-eyi egwu na Europe.
Nakwa ihe mgbaru ọsọ mara mma ya, akụkọ steti Pepe gosipụtara na ọ bụkwa otu n'ime ihe mgbaru ọsọ kachasị mma na ndị Europe.
Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ oge mbụ kemgbe Eden Hazard ekpe maka Chelsea na 2012 na Lille nwere ike ikwu na ọ bụ otu n'ime ndị egwuregwu kachasị egwu na egwuregwu football. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Nicolas Pepe Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Ndụ mmekọrịta
Na Nico na-ebili ka ama, ajụjụ na onye ọ bụla na egbugbere ọnụ bụ ... Who is her girlfriend or WAG ?. Enweghị ịgọnahụ eziokwu ahụ bụ na Nico nwere àgwà ndị na-adọrọ adọrọ dị iche iche gụnyere ịma mma ya agaghị eme ka ọ bụrụ mkpụrụ osisi na-ama n'anya nye ụmụ nwanyị.
Ònye bụ Nwanyi Nicolas Pepe? Ebe E Si Nweta Ghanasoccernet Radio
Otú ọ dị, ihe omume ndị zoro ezo nke Nico bụ otu nke na-agbapụ nyocha nke ọha mmadụ nanị n'ihi na ịhụnanya ịhụnanya ya bụ nke onwe ya ma ọ bụrụ na enwere onwe ya n'efu. Dị ka n'oge ederede, Nicolas ahọrọwo ilekwasị anya na ọrụ ya ma chọpụta izere ọhụụ ọ bụla na ndụ ya.
Nicolas Pepe Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Ndụ nke Onye
Ịmata ihe gbasara ndụ Nicolas Pepe nwere ike inyere gị aka ịchọta ya n'ụzọ zuru ezu.
Malite na ya, ọ bụ onye nwere àgwà ngwa ngwa. Pepe nwere mmekọrịta dị mma, nkwurịta okwu na njikere mgbe niile iji nwee obi ụtọ na ndị enyi. Otú ọ dị, e nwere oge ọ na-echebara echiche na iche echiche. Oge ndị a bụ oge ọ na-echebara ọdịnihu ya echiche.
N'ikpeazụ na ndụ onwe ya, Pepe bụ onye na-enwe mmetụta mgbe niile na enweghi oge maka ihe niile.
Nicolas Pepe Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Ndụ Ezinụlọ
Isi ihe na-eme Nico bụ ndị nne na nna na-elekọta ya. Dịka ọmụmaatụ, nna ya, na-achụ ihe niile iji mee ka nwa ya nwee ọdịnihu dị mma.
Nicolas Pepe na papa ya. Ebe E Si Nweta MondialSport
Ị maara?… Nna papa Nicolas, Celestine Pepe bụ otu ndị na-agba ụkwụ n'egbughị oge ịghọ ọkachamara. Celestin Celestin kpebiri ịghọ onye nrịba ama na onye nnọchiteanya site n'aka nwa ya nwoke Nicolas. Nke a bụ oge ọ kpebiri itinye onye nlekota ụlọ mkpọrọ ya n'ọrụ ka nwa ya nwoke nwee ọrụ. Celestin na-arụ ọrụ ma wepụta oge soro nwa ya nwoke maka ọzụzụ. Ọ gara rue inweta ikike dịka onye nkụzi nke bọl iji nọrọ nso nwa ya nwoke.
Taa, nne na nna Nicolas Pepe nọ n'ihu na-erite abamuru nke inwe ya n'ime ezinụlọ. Dị ka akụkọ mgbasaozi mgbasaozi ya si kwuo, ọ na-egosi na ya na nne ya dị mma.
Nicolas Pepe na nne ya. Ebe E Si Nweta IG
Pepe enweghi etolite na nne na nna ya. O nwekwara ụmụnne (onye otu n'ime ha bụ Kwame Pepe) na ndị ezinụlọ ya ndị ọzọ. Pepe nraranye iji jide n'aka na nne na nna ya nwere obi iru ala ma nwee afọ ojuju dị ka ntinye aka ya na Atletico Madrid.
Nicolas Pepe, nne ya na nwanne ya. Ebe E Si Nweta IG
Nicolas Pepe Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Eziokwu nke NdụStyle
Dabere na Transfekt, Nicolas Pepe bụ ugbu a ahịa kpọrọ 36 nde Euro. Ọhụụ a na-eme ka ọ bụrụ nde mmadụ nde mmadụ. Otú ọ dị, eziokwu a adịghị agafe n'ụzọ dị nnọọ ụtọ.
Nicolas Pepe maara ihe banyere ijikwa usoro ego ya. Nke a pụtara na ị gaghị etinye aka dị ka onye nzuzu, ma ọ bụ na-agbanwe ndụ ya.
Nkọwa akụkọ nke Nicolas Pepe. Ebe E Si Nweta IG
Nicolas Pepe Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Eziokwu efu
Kedu Religion bụ Nicolas Pepe? Nicolas bụ onye na-agba ọsọ Alakụba, onye na-achọ igosipụta okpukpe ya na ụdị. Ọ na-enwe mmasị ileta ọzara Dubai na United Arab Emirates.
Nicolas Pepe gosipụtara okwukwe ya Muslim. Ebe E Si Nweta IG
Mkpakọrịta ọjọọ nke Pepe na ndị mmegide ibe ya Jonathan Bamba na Jonathan Ikone enwetawo aha ahụ bụ "Ntugharị akwụkwọ". Ị maara?… Nickname a bụ aha French maka Ụzọ Runner site na usoro Looney Tunes cartoon.
Nicolas Pepe's best-striking partners- The Bip Bip
Nico na-ahọrọ ịrụ ọrụ site na nku kama ịrụ ọrụ na-amaghị nke otu onye na-eme ihe na-eme ka ọ bụrụ onye nkụzi na-enye ya.
Eziokwu nke Nicolas Pepe- Ọrụ Ya Ọmụma. Ebe E Si Nweta 90Min
Nicolas Pepe Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa akụkọ Eziokwu- Video Nchịkọta
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ Nicolas Pepe Ụmụaka na akụkọ na-adịghị mma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.